ဘုရားဂုဏ်တော်များများပွားပါ - Lucky9
Knowledge by Lucky9
နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကူးလာတယ် . . .
ဘုန်းဘုန်းတို့ နှစ်သစ်အချိန်အခါက ကာလ တစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့ သိပ္ပံနည်းအရ နေက ဟိုးဒက္ခိဏအရပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကို နှစ်သစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက နေကို ပတ်လှည့်နေတာ။ အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ သစ်ပင်တောတောင် ရေမြေတွေလည်း ဥတုအလိုက် နေရဲ့အပူရှိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းကြတယ်။
အဲဒီလိုပြောင်းသလို သက်ရှိသတ္တဝါတွေက ဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့ အကောင်းဆုံးက နှစ်သစ်မှာဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ် မေတ္တာပွားတာ အလွန်တရာ ကောင်း ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်း ကူးလာတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် သံလိုက်တုံးကြီးနဲ့ ရိုးရိုးသံလေး အတူထားလိုက်ရင် သံလိုက်တုံးကြီးထဲက သံလိုက်ဓာတ်တွေက ရိုးရိုးသံထဲကူးသွားပြီးတော့ ရိုးရိုးသံလေးပါ သံလိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်ပါများရင် ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းသွားတယ်။ ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းသွားတဲ့အတွက် သေတောင်မှ မပုပ်တော့ဘူး။ ရဟန်းသာများပရိနိဗ္ဗာန်စံရင် မပုပ်သလို ဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း သေရင် မပုပ်ဘူး။ဘယ်လောက်ကြာကြာ စိတ်ရမလဲဆိုရင် အနှစ် (၂ဝ) စိတ်ရမယ်။ ဘုရားဂုဏ်တော်ကို အနှစ် (၂ဝ) ပုတီးစိတ်ရင် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး မပုပ်တော့ဘူး။ အဲဒီလို ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတယ်။
မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေ ကိန်းသွားလို့ အဲလိုဂုဏ်တော်တွေ ကိန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဖြစ်လေရာ ဘဝသံသရာမှာလည်းပဲ ဘုရားဓာတ်တွေရဲ့ အရှိန်အဝါကြောင့် မြင့်မြတ်တဲ့ အမျိုးအနွယ်ဖြစ် မြင့်မြတ်တဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ခံစားရပြီး နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ကို မြန်မြန်ရတယ်။
နိဗ္ဗာန်ကို မြန်မြန်လိုချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရားဂုဏ်တော်ပုတီးစိတ်၊ မေတ္တာပွား၊ မေတ္တာပွား ဆိုတာကလည်း မေတ္တာ ဆိုတာ အမျိုးမျိူးရှိတယ်၊ အမျိုးမျိုးရှိတော့ အကျဉ်းချုပ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေလို့ ဒီလိုပွားရတယ်။ သတ္တဝါလေးတွေမြင်ရင် ခွေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဝက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ငှက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပုရွက်ဆိတ်ဖြစ်ဖြစ် သတ္တဝါလေးတွေမြင် ရရင် ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ အဲဒီလိုမေတ္တာပွားရင်လည်း ဘုရားဓာတ်တွေက ဒီခန္ဓာကိုယ်ကို ကိန်းလာတယ်။
ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတဲ့အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို လှူတဲ့တန်းတဲ့လူလည်း ပေါလာတယ်။ ပေးတဲ့ကမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အကျိုးကြီးမားတယ်။ ဘယ့်နှယ့်ကြောင့်ဆိုတော့ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြတ်စွာဘုရားများ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ များကို လှူလို့ရှိရင် ရိုးရိုးလူကို လှူတာထက်အကျိုးများတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်လဲဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အများအားဖြင့် ဖိုလ်ဝင်စားပြီးတော့နေကြတယ်။ အဲဒီဖိုလ်ရဲ့အာရုံဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကလည်း လောကုတ္တရာစိတ်တွေ ဝင်စားပြီး ဒီခန္ဓာကိုယ်က မွှေးကြိုင်သွားတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ရေမွှေး ၊ ပေါင်ဒါ၊ နံ့သာဖြူစတဲ့ အမွှေးနံ့သာကဲ့သို့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက မွှေးနေတယ်။ ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပုတီးစိတ်တာများရင် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက သေလည်း မပုပ်တော့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မေတ္တာတွေ မပွားနိုင်ကြလို့ ပစ်ကြ၊ ခတ်ကြ၊ သတ်ကြ၊ ပုတ်ကြ၊ ရိုက်ကြ၊ နှက်ကြတာ မေတ္တာမပွားနိုင်လို့ မေတ္တာပွားရင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ကိုယ့်ညီလေးတွေလို အကိုကြီးတွေလို၊ သားလေး၊ သမီးလေးတွေ လို အောက်မေ့ပြီးတော့ မေတ္တာထားရင် ခိုက်ရန်ဖြစ်တာမရှိတော့ဘူး။ ခိုက်ရန်ဖြစ်တာမရှိတော့ စစ်တိုက်တာတွေ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်နှင့်တစ်ပြည် စစ်တွေဖြစ် ဗုံးတွေကြဲ စက်သေနတ်တွေ ပစ်တာမရှိဘူးဆိုရင် တိုင်းပြည်အေးချမ်း သာယာတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအေးချမ်းအောင် ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပုတီးစိတ် မေတ္တာပွားကြရမယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် နှစ်သစ်အချိန်ခါမှ စပြီးတော့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အားလုံးက ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုတစ်နေ့ သုံးခါအဖြစ် မနက်အိပ်ရာထတစ်ခါ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ တစ်ခါ ညအိပ်ရာဝင် တစ်ခါ ပုတီးစိတ်ပြီး မေတ္တာပွားကြပါ။ မေတ္တာ ပွားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြကုန်စေသတည်း။
Credit •• Ashin Sūcatta Royal Mandalay
နစေ့ဉျနစေ့ဉျ ဘုရားဂုဏျတျော(၉)ပါးကို ပှားမြားရတယျ။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏျတျောတှေ ပှားမြားရငျ ဘုရားဓာတျတှေ တညျထားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျပျေါ ဘုရားဓာတျတှေ ကိနျးလာတယျ။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတျတှေ ကိနျးတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုနျးတနျခိုး အာနုဘျောတှလေညျး တဖွညျးဖွညျးကူးလာတယျ . . .
ဘုနျးဘုနျးတို့ နှဈသဈအခြိနျအခါက ကာလ တဈနှဈပွောငျးသှားတော့ သိပ်ပံနညျးအရ နကေ ဟိုးဒက်ခိဏအရပျကနေ တဖွညျးဖွညျး ရပျပွီးတော့ ဒီဘကျပွနျပွောငျးလာတာကို နှဈသဈလို့ချေါတာပေါ့။ ကမ်ဘာကွီးက နကေို ပတျလှညျ့နတော။ အဲဒီလိုအခြိနျအခါမြိုးမှာ ဒီကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့ လူတှေ၊ နတျတှေ၊ ဗွဟ်မာတှေ၊ သဈပငျတောတောငျ ရမွေတှေလေညျး ဥတုအလိုကျ နရေဲ့အပူရှိနျနဲ့လိုကျပွီးတော့ ပွောငျးကွတယျ။
အဲဒီလိုပွောငျးသလို သကျရှိသတ်တဝါတှကေ ဘာပွောငျးရလဲဆိုတော့ အကောငျးဆုံးက နှဈသဈမှာဘုရားဂုဏျတျော ပုတီးစိပျ မတ်ေတာပှားတာ အလှနျတရာ ကောငျး ပါတယျ။ နစေ့ဉျနစေ့ဉျ ဘုရားဂုဏျတျော(၉)ပါးကို ပှားမြားရတယျ။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏျတျောတှေ ပှားမြားရငျ ဘုရားဓာတျတှေ တညျထားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျပျေါ ဘုရားဓာတျတှေ ကိနျးလာတယျ။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတျတှေ ကိနျးတော့ ဘုရားရဲ့ဘုနျးတနျခိုးအာနုဘျောတှလေညျး တဖွညျးဖွညျး ကူးလာတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ သံလိုကျတုံးကွီးနဲ့ ရိုးရိုးသံလေး အတူထားလိုကျရငျ သံလိုကျတုံးကွီးထဲက သံလိုကျဓာတျတှကေ ရိုးရိုးသံထဲကူးသှားပွီးတော့ ရိုးရိုးသံလေးပါ သံလိုကျဖွဈသှားတယျ။ အဲဒီဘုရားဂုဏျတျော ပုတီးစိပျပါမြားရငျ ဒီခန်ဓာကိုယျထဲဘုရားဓာတျတှေ ကိနျးသှားတယျ။ ဘုရားဓာတျတှေ ကိနျးသှားတဲ့အတှကျ သတေောငျမှ မပုပျတော့ဘူး။ ရဟနျးသာမြားပရိနိဗ်ဗာနျစံရငျ မပုပျသလို ဘုရားဂုဏျတျော ပုတီးစိတျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြားလညျး သရေငျ မပုပျဘူး။ဘယျလောကျကွာကွာ စိတျရမလဲဆိုရငျ အနှဈ (၂ဝ) စိတျရမယျ။ ဘုရားဂုဏျတျောကို အနှဈ (၂ဝ) ပုတီးစိတျရငျ ဒီခန်ဓာကိုယျကွီး မပုပျတော့ဘူး။ အဲဒီလို ဘုနျးတနျခိုးကွီးတယျ။
မွတျစှာဘုရားသခငျရဲ့ ဂုဏျတျောတှေ ကိနျးသှားလို့ အဲလိုဂုဏျတျောတှေ ကိနျးသှားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျက ဖွဈလရော ဘဝသံသရာမှာလညျးပဲ ဘုရားဓာတျတှရေဲ့ အရှိနျအဝါကွောငျ့ မွငျ့မွတျတဲ့ အမြိုးအနှယျဖွဈ မွငျ့မွတျတဲ့ စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ ခံစားရပွီး နောကျဆုံး နိဗ်ဗာနျကို မွနျမွနျရတယျ။
နိဗ်ဗာနျကို မွနျမွနျလိုခငျြတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျသညျ ဘုရားဂုဏျတျောပုတီးစိတျ၊ မတ်ေတာပှား၊ မတ်ေတာပှား ဆိုတာကလညျး မတ်ေတာ ဆိုတာ အမြိုးမြိူးရှိတယျ၊ အမြိုးမြိုးရှိတော့ အကဉျြးခြုပျဆိုရငျတော့ ကနျြးမာပါစေ၊ ခမျြးသာပါစလေို့ ဒီလိုပှားရတယျ။ သတ်တဝါလေးတှမွေငျရငျ ခှေးဖွဈဖွဈ၊ ဝကျဖွဈဖွဈ၊ ကွကျဖွဈဖွဈ၊ ငှကျဖွဈဖွဈ၊ ပုရှကျဆိတျဖွဈဖွဈ သတ်တဝါလေးတှမွေငျ ရရငျ ကနျြးမာပါစေ၊ ခမျြးသာပါစေ၊ အဲဒီလိုမတ်ေတာပှားရငျလညျး ဘုရားဓာတျတှကေ ဒီခန်ဓာကိုယျကို ကိနျးလာတယျ။
ဘုရားဓာတျတှေ ကိနျးလာတဲ့အတှကျ အဲဒီပုဂ်ဂိုလျကို လှူတဲ့တနျးတဲ့လူလညျး ပေါလာတယျ။ ပေးတဲ့ကမျးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှလေညျး အကြိုးကွီးမားတယျ။ ဘယျ့နှယျ့ကွောငျ့ဆိုတော့ ရဟနျးပုဂ်ဂိုလျမြား၊ မွတျစှာဘုရားမြား၊ ပစ်စကေဗုဒ်ဓါ မြားကို လှူလို့ရှိရငျ ရိုးရိုးလူကို လှူတာထကျအကြိုးမြားတယျ။ အဘယျ့ကွောငျ့လဲဆိုရငျ မွတျစှာဘုရားရှငျ ပစ်စကေဗုဒ်ဓါဆိုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေ အမြားအားဖွငျ့ ဖိုလျဝငျစားပွီးတော့နကွေတယျ။ အဲဒီဖိုလျရဲ့အာရုံဖွဈတဲ့ နိဗ်ဗာနျကလညျး လောကုတ်တရာစိတျတှေ ဝငျစားပွီး ဒီခန်ဓာကိုယျက မှေးကွိုငျသှားတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ရမှေေး ၊ ပေါငျဒါ၊ နံ့သာဖွူစတဲ့ အမှေးနံ့သာကဲ့သို့ ဒီခန်ဓာကိုယျကွီးက မှေးနတေယျ။ ဘုရားဂုဏျတျောတှေ ပုတီးစိတျတာမြားရငျ ဒီခန်ဓာကိုယျကွီးက သလေညျး မပုပျတော့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုအကြိုးရှိတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတ်ေတာတှေ မပှားနိုငျကွလို့ ပဈကွ၊ ခတျကွ၊ သတျကွ၊ ပုတျကွ၊ ရိုကျကွ၊ နှကျကွတာ မတ်ေတာမပှားနိုငျလို့ မတ်ေတာပှားရငျ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ ကိုယျ့ညီလေးတှလေို အကိုကွီးတှလေို၊ သားလေး၊ သမီးလေးတှေ လို အောကျမပွေီ့းတော့ မတ်ေတာထားရငျ ခိုကျရနျဖွဈတာမရှိတော့ဘူး။ ခိုကျရနျဖွဈတာမရှိတော့ စဈတိုကျတာတှေ တိုငျးပွညျ တဈပွညျနှငျ့တဈပွညျ စဈတှဖွေဈ ဗုံးတှကွေဲ စကျသနေတျတှေ ပဈတာမရှိဘူးဆိုရငျ တိုငျးပွညျအေးခမျြး သာယာတယျ။ တိုငျးပွညျနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးအေးခမျြးအောငျ ဘုရားဂုဏျတျောတှေ ပုတီးစိတျ မတ်ေတာပှားကွရမယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ နှဈသဈအခြိနျခါမှ စပွီးတော့ ကမ်ဘာသူကမ်ဘာသား အားလုံးက ဘုရားဂုဏျတျောကိုတဈနေ့ သုံးခါအဖွဈ မနကျအိပျရာထတဈခါ နလေ့ယျ ၁၂ နာရီ တဈခါ ညအိပျရာဝငျ တဈခါ ပုတီးစိတျပွီး မတ်ေတာပှားကွပါ။ မတ်ေတာ ပှားခွငျးဖွငျ့ ကမ်ဘာသူ ကမ်ဘာသား နိုငျငံသူ နိုငျငံသားမြား ကိုယျစိတျနှလုံး ကနျြးမာခမျြးသာကွကုနျစသေတညျး။
ငွေကြေးအခက်အခဲ ပြေလည်စေသော အစီအရင်
ဝက်ခြံတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၅ ) ချက်
ငွေကို ရေလိုသုံး၍ အလျှံအပယ် လှူဒါန်းနိုင် သောကျင့်စဉ် ဂါထာ တော်
ငွေကြေးလှူဒါန်းရာတွင် အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆက်လက်ရပ်တည်နေ
Myanmar Got Talent မှာ Winner ဆုရရှိသွားတဲ့ အသက်၅နှစ်အရွယ် …
လူရွှင်တော်ကြီး ဦးတိုင်းကျော်ကို သူ့ရဲ့ဇာတ်ထဲခေါ်ပြီး အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဝင်းနောင်
ဟိန်းဝေယံကို ဗိုက်ကြီးတကားကားနဲ့ အနောက်ကနေ လိုက်စနောက်နေတဲ့ ရတနာမိုင်
ဖခင်က သမီးကြီးကို သားမယားကျင့်နေစဉ် သမီးငယ်က ချောင်းကြည့်သောအခါ..(စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ်)